Ngaba ifanitshala yomthi oqinileyo ifanele igcinwe ngamaxesha amane onyaka? Indlela yokunyamekela nganye?-Umzi-mveliso waseAlice
Kwiimeko eziqhelekileyo, i-waxing kufuneka yenziwe kanye ngekota, ukwenzela ukuba ifenitshala yomthi oqinileyo ibonakala ikhazimulayo, kwaye umphezulu awuyi kutsala uthuli, okwenza kube lula ukucoca. Kuphela ngokunikela ingqalelo ekucoceni nasekugcinweni kwansuku zonke kunokuthi ifenitshala yomthi oqinileyo ihlale ngonaphakade.
Okokuqala, kuqinisekileyo ukuba ifenitshala yomthi oqinileyo kufuneka igcinwe ngokuhambelana nokutshintsha kwemozulu kwiisizini ezine.
Iindlela zokugcinwa kwamaxesha amane onyaka zezi zilandelayo.
①Ntwasahlobo:Kunomoya entlakohlaza, kwaye kukho amasuntswana e-pollen ahlukeneyo, i-willow catkins, uthuli, amangolwane, umngundo, njl.njl. Ezi zinto zimdaka ziya kutsalwa kuzo zonke iikona zefenitshala. Musa ukusula ngelaphu elimanzi okanye i-rag eyomileyo xa ucoca. , Ngaphandle koko kuya kubangela i-abrasion kumphezulu wefenitshala. Musa ukuyicoca ngee-solvents eziphilayo. Kungcono ukuyisula ngekotoni eyomileyo kunye nelinen yelinen. Ukungcola okuphezu kwefenitshala, unokuyihlamba ngesepha epholileyo kunye namanzi, uze uyomise. Iwax yanele. ...
Ukongeza, iqondo lobushushu liyaguquka, imvula yasentwasahlobo ifume kakhulu, kwaye nemozulu ifumile noko. Ngeli xesha, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ekugcinweni kwefenitshala yokhuni ukugcina igumbi lingena umoya. Ukuba umgangatho umanzi, imilenze yefenitshala kufuneka iphakanyiswe ngokufanelekileyo, ngaphandle koko imilenze iya kuhlanjululwa lula ngumswakama.
②Ihlobo:Kuyanetha ehlotyeni, kwaye kufuneka uhlale uvule iifestile ukuze kungene umoya. Ukubekwa kwefenitshala kufuneka kulungiswe ngokufanelekileyo ukuphepha ukukhanya kwelanga kunye nokugubungela ngamakhethini ukuba kuyimfuneko. Ngenxa yemozulu eshushu kakhulu ehlotyeni, abantu basebenzisa izifudumezi-moya rhoqo, ngoko ke kufuneka kusetyenziswe izixhobo zokupholisa umoya ngobuchule nangengqiqo ukukhusela ifenitshala. Ukuguqula rhoqo i-air conditioner kunokukhupha umswakama, ukunciphisa ukufunxa ukufuma kunye nokwandiswa kweenkuni, kwaye ugweme ukuvuvukala kunye nokuguqulwa kwesakhiwo se-tenon. Umahluko omkhulu wobushushu ubangela umonakalo kwifenitshala okanye ukuguga kwangaphambi kwexesha.
③Ekwindla: Ekwindla, umswakama womoya uphantsi, umoya wangaphakathi womile, kwaye ifanitshala yomthi kulula ukuyigcina. Nangona ilanga lasekwindla lingekho ndlongondlongo njengehlobo, ixesha elide ilanga kunye nemozulu eyomileyo ngokwendalo yenza iinkuni zome kakhulu kwaye zithande ukuqhekeka kwaye ziphele kancinci. Ngoko ke, kusafuneka ukuphepha ukukhanya kwelanga.
Xa imozulu yomile, gcina ifenitshala yomthi oqinileyo ifumile. Ifanitshala yokhathalelo lweeoyile eziyimfuneko ezifunxwa lula yimicu yomthi kufuneka zisetyenziswe. Ngokomzekelo, ioli ye-orenji ayinakutshixa kuphela ukufuma kwemithi ukuze ithintele ukuqhekeka kunye nokuguqulwa, kodwa kwakhona yondla iinkuni kwaye yenza ifenitshala yomthi iphinde ibe nokukhanya kwayo ngaphakathi.
④Ubusika:Isimo sezulu sisomile kakhulu ebusika, esinokuthi sesona sihlandlo se-taboo sefenitshala yokhuni oluqinileyo, ngoko kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngakumbi. Isimo sezulu somile, kwaye ixesha lokuvula ifestile kufuneka lifinyezwe kangangoko kunokwenzeka. Kucetyiswa ukuba usebenzise i-humidifier ukulungelelanisa ukufuma komoya wangaphakathi. Kukho uthuli oluninzi olomileyo ebusika. Indlela yokugcina uthuli kunye nokungcola okuqokelelwe phezu kwefenitshala iyafana naleyo entwasahlobo. Kuyafaneleka ukukhumbuza apha ukuba abahlobo abasoloko besebenzisa ukufudumeza kufuneka baqaphele ukubeka ifenitshala kufuphi nokufudumala, kwaye bagweme ukushisa okugqithisileyo kwendlu.
UAlice ngumvelisi weepleyiti zamagama. Ukusukela ekusekweni kwayo ngo-1998, izibophelele ekuveliseni iipleyiti zamagama ezichanekileyo. Ngomgangatho obalaseleyo, inkonzo enenkathalo, kunye nemfezeko elungileyo, ibonelela abathengi ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo zemiqondiso ezilungiselelweyo.
YANGAPHAMBILI Indlela yokugcina ngokufanelekileyo iinkuni zefenitshala? -Alice umzi-mveliso
Indlela yokulungisa amanxeba e-mahogany eqinile yokhuni ifenitshala-i-Alice factory OKULANDELAYO